Iingxaki zokutshaja nge-Apple Watch kunye ne-watchOS 8.3 | Ndisuka kuMac
Imiba yokutshaja nge-Apple Watch kunye ne-watchOS 8.3
Abanye abasebenzisi be-Apple Watch Series 7 banamava iingxaki zokutshaja emva kokuhlaziya emva kokuhlaziywa kwinguqu yamva nje ye-watchOS ekhoyo, i-8.3, njengoko sinokufunda kwi-Reddit kunye noluntu lwenkxaso ye-Apple. Uninzi lwezikhalazo zinxulumene iitshaja zomntu wesithathu.
Le ngxaki, kubonakala ngathi ayichaphazeli kuphela i-Apple Watch Series 7, kodwa, ukongeza, ikwachaphazela iimodeli zangaphambili. Uninzi lwezikhalazo zibandakanya iitshaja ezitshiphu ezifumanekayo kwiAmazon.
Kwiimeko ezininzi, i-Apple Watch iqala ukutshaja imizuzu embalwa ize iyeke ngokupheleleyo. Ukuqalisa kwakhona i-Apple Watch kunokunceda ukuqalisa ukutshaja, kodwa akubonakali ngathi sisisombululo esisisigxina kubantu abaninzi, njengoko iingxaki zokutshaja ziphinda zenzeke emva kwemizuzu embalwa.
Abanye abasebenzisi bathi le ngxaki iyenzeka, nangona kaninzi, kunye nediski yokulayisha esemthethweni ye-Apple, ukuba intlawulo icotha kunesiqhelo okanye ukuba i-Apple Watch icima ngokuthe ngqo xa iphelelwa yibhetri ngelixa, ngokwethiyori, bayatshaja.
Kubekho izikhalazo malunga nemiba yokutshaja kwi-Apple Watch Series 7 ukusukela ekuqaleni kukaNovemba. I-Apple yaqala yathetha ngomba owawubangela isantya esicothayo sokulayisha kuhlaziyo lwe-watchOS 8.1.1.
Abanye abasebenzisi baqhubeka bebona imiba nasemva kohlaziyo lukaNovemba watchOS 8.1.1, kunye nohlaziyo lwe-watchOS 8.3. kubonakala ngathi kuzise ingxaki nangakumbi Abanini be-Apple Watch.
Akucaci ukuba i-apile inesisombululo kwimiba abasebenzisi abahlangabezana nayo emva kohlaziyo lwe-watchOS 8.3, kodwa umba uya kuqwalaselwa kuhlaziyo lwexesha elizayo.
Ukuba unengxaki yokutshaja i-Apple Watch yakho, ekuphela kwento onokuyenza zixhobise ngomonde. Ngokukodwa, ndinochungechunge olusemthethweni lwe-6 kunye netshaja endiyibiza ngayo yonke imihla ngaphandle kweengxaki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Imiba yokutshaja nge-Apple Watch kunye ne-watchOS 8.3
I-Apple ivala iivenkile ezininzi ngenxa yobhubhane
Nomad Base Station Hub. Ngoku iyahambelana nokutshaja kweMagSafe